ဒေသခံ ၇ဦး သေဆုံးမှု တပ်သားနှစ်ဦးကို ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူမည်
ကရင်ပြည်နယ် ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ် အနန်းကွင်းရွာမှာ တပ်မတော်သား နှစ်ယောက် ပစ်ခတ်ခဲ့လို့ သေဆုံးခဲ့သူတွေကို တွေ့ရစဉ်
ဓါတ်ပုံ - ကျိုက်မရောမုဒုံ သတင်း
ကရင်ပြည်နယ် ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်မှာ ဒေသခံ ၇ ဦးကို သေနတ်နဲ့ ပစ်သတ်ခဲ့တဲ့ တပ်မတော်သား ၂ ဦးကို စစ်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်မှုနဲ့ စစ်တရားရုံးမှာ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူသွားမယ်လို့ တပ်မတော်က သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီလ ၅ ရက်နေ့က ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ် အနန်းကွင်းကျေးရွာမှာရှိတဲ့ တပ်စခန်းမှာ ရိက္ခာလာထုတ်တဲ့ တပ်မတော်သား ၂ ဦးက သေနတ်နဲ့ ပစ်ခဲ့တာကြောင့် အသက် ၈ နှစ်အရွယ် ကလေးတစ်ဦးအပါအဝင် အရပ်သား ၇ ဦးသေဆုံးပြီး ၁ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီတပ်မတော်သား ၂ ဦးကို ၁၉၅၉ တပ်မတော် နည်းဥပဒေအရ အရေးယူသွားမှာဖြစ်ကြောင်း တပ်မတော် သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇော်မင်းထွန်း က RFA ကို ပြောပါတယ်။
တပ်မတော်၊ နယ်မြေခံရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေက သေနတ်နဲ့ ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ တပ်သား ၂ ဦးကို ပိတ်ဆို့ဖမ်းဆီးခဲ့ရာမှာ တပ်သားမြင့်ဝေကို ဧပြီလ ၅ ရက်နေ့ ညနေမှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီး တပ်သားငြိမ်းချမ်းကိုဧပြီ ၆ ရက်နေ့ နေ့လည်ပိုင်းမှာ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ တပ်သား ၂ ဦးကို လက်နက်နဲ့ ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်မှု၊ အရက်သေစာ သောက်စား မူးယစ်မှုတွေနဲ့ စစ်တရားရုံးမှာ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ စစ်ဆေးအရေးယူသွားမှာဖြစ်ပြီး လူ ၇ ဦးသေဆုံးပြီး ၁ ဦး အပြင်းအထန် ဒဏ်ရာရရှိမှုအတွက် တပ်မတော် အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၇၂ အရ နယ်ဘက် တရားရုံးကို လွှဲပြောင်း စစ်ဆေးစီရင်သွား မယ်လို့ တပ်မတော်ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရပါတယ်။
ဒီသတင်းကို RFA သတင်းထောက် ကိုကျော်ထွန်းနိုင် ပေးပို့တာပါ။
တပ်သား ၂ ဦး ပစ်ခတ်မှုကြောင့် သေဆုံးသူတွေအတွက် နစ်နာကြေးတောင်း
ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်မှာ ကလေးတစ်ဦး အပါအဝင် ၇ ဦး ပစ်သတ်ခံရ
လားရှိုး နည်းပညာတက္ကသိုလ်က ဆန္ဒပြနေတဲ့ ကျောင်းသား အဖမ်းခံရ
ပြန်လာမယ့် ဒုက္ခသည်တွေကို မောင်တောဒေသအတွင်း လွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်ပေးမည်
One big question to be asked to Army Authorities i.e. "even those two soldiers are on leave, were they allowed to carry guns with them?"
Apr 10, 2019 06:33 AM